Tsy mila diplaoma amin'ny fandraharahana hahafantarana izany | Martech Zone
Tsy mila diplaoma amin'ny fandraharahana hahafantarana izany ianao
Alarobia, Oktobra 23, 2013 Alarobia, Oktobra 23, 2013 Douglas Karr
Eny ary, tonga ny fotoana hanaovana fikorontanana. Tamin'ity herinandro ity dia nokapohina indroa aho ary tena fatiantoka aho fa ny sasany amin'ireto olona ireto dia nahavita raha mbola nanao raharaham-barotra izy ireo. Te hanana zavatra vitsivitsy mahitsy aho rehefa mandeha mifampiraharaha sy mividy serivisy amin'ny masoivohonao manaraka.
Ny vidiny dia izay aloanao, fa tsy izay azonao
Ity ny vidin'ny vokatra na serivisy tadiavinao hovidiana. Na dia mety hitovy aza ny vidin'ny vokatra roa na serivisy roa dia tsy hitovy ny tena vokatra na serivisy azonao. Vokatr'izany dia aza mangataka lisitra fivarotana banga ary mangataha fakan-teny voafetra… fantatray izay ataonareo. Handray ny lisitry ny fiantsenana ianao ary hangataka fitanisana voafetra ary hiantsena azy ireo amin'ny olon-kafa. Tsy olon-kafa isika. Na inona na inona antsipiriany momba ny lisitra fiantsenana, averiko ihany fa tsy olon-kafa isika. Hafa ny zavatra omenay anao. Endri-javatra samy hafa, serivisy samihafa, isam-potoana samihafa, fihetsika samy hafa ary valin'ny orinasa hafa samy hafa.
Raha miantsena amin'ny maso ivoho miorina amin'ny vidiny ianao dia olona tsy mahatakatra asa. Teo, hoy aho. Ny marketing amin'ny Internet dia tsy Wal-mart. Ajanony io.
Ny fandoavana kely dia tsy midika hoe nitahiry vola ianao
Ny fanapahan-kevitra noraisinao sy nifanekenao fa handoa dia antenaina fa mifamatotra amin'ny sanda mialoha izay ho azonao amin'ny vokatra na serivisy. Raha nahazo fahazoan-dàlana rindrambaiko isan-taona ianao ary nanampy anao hanao zavatra mahomby kokoa ilay rindrambaiko (aka: Fiverenana amin'ny fampiasam-bola), nanampy anao hitazona orinasa bebe kokoa (aka: Fampiasam-bola amin'ny famatsiam-bola), nanampy anao hahazo orinasa bebe kokoa (aka: Fiverenana amin'ny fampiasam-bola) na nanampy anao hampitombo ny tombom-barotra (aka: Fiverenana amin'ny fampiasam-bola) avy eo ny ny sandan'ny zavatra voarainao dia mihoatra ny vidinao. Zavatra tsara izany. Ity no tianao hatao.
Mifanohitra amin'izany, mandoa Kely kokoa ratsy ny vola fa tsy mahazo tambiny amin'ny fampiasam-bola. Midika izany fa very vola ianao… tsia voavonjy vola. Ka… andeha mividy ny sary famantarana amin'ny tranokala marobe fa tsy manakarama maso misahana ny marika ary mandany enina ho toy ny orinasa miliara dolara fa tsy fivarotana zava-pisotro misy alikaola ao an-tanàna. Tokony hanantena valiny hafa ianao ary sandany hafa amin'ny vola ampidirinao.
Ny fandoavana bebe kokoa dia tsy midika hoe voafitaka ianao
Rava ny fahitalavin'i Neny tamin'ity herinandro ity. Nijery izy ary 7 taona izao ary 2,200 500 $ ny vidiny rehefa nividy azy izy. Androany, ny Neny dia nandidy fahitalavitra tsara lavitra kokoa miaraka amin'ny efijery midadasika $ 7. Gaga izy fa nivoatra haingana ny teknolojia ary afaka nividy fahitalavitra vaovao sy tsara kokoa izy. Tsy tezitra izy satria noviraviraina XNUMX taona lasa izay. Faly izy fa nahazo zavatra mahafinaritra izao. Zavatra tsara izany.
Vao haingana izahay tatitra momba ny fandinihana tranokala mandeha ho azy maharitra herinandro ny olona roa vao nahavita tanana. Izay nitondra anay sahabo ho 60 ora niaraka tamin'ny rindranasa rindrambaiko nomenay alalana ankehitriny dia tsy maharitra adiny iray akory. Navelako ho fantatry ny sasany amin'ireo mpanjifanay izay faly tamin'ny tatitra nataonay taloha raha toa ny ezaka vaovao ary ampahafantaro azy ireo izany - nanomboka ny vidinay Ankehitriny dia ampahany amin'ny zavatra nisy azy ireo, nampita izany tamin'ny mpanjifantsika izahay. Zava-dehibe izany - ny zavatra naloan'izy ireo in-1 dia afaka mahazo tatitra iray taona iray manontolo avy aminay.
Ny ankamaroany dia nisoratra anarana, fa ny iray kosa nanoratra ahy indray ary nilaza fa sosotra izy ireo noviraviraina ka nandoa be izy ireo tamin'ny tatitra teo aloha. Mazava ho azy, rehefa nanatitra ilay tatitra izahay, dia faly izy ireo… tsy sosotra. Nampiasain'izy ireo ho toy ny drafitra fandrafetana ny paikadim-barotra amin'ny Internet ho an'ny taona manaraka ny tatitra. Ny fampiasam-bola an'arivony dolara vitsivitsy ao anatin'ilay tatitra dia miteraka vola an'aliny dolara ho valiny. Izany indrindra no noeritreretin'izy ireo, mandra-pidinay ny vidinay. Rehefa nampidina ny vidiny izahay dia nifindra tamin'ny vidiny lehibe ka hatrany amin'ny vidiny.
Ankehitriny rehefa tapitra ny rant, dia holazaiko izany. Hiasa amin'ny fomba mahomby araka izay azo atao izahay hahazoana antoka fa ny sandan'ny asa ataonay dia mihoatra ny vidiny aloanao. Rehefa manao an'izany isika dia hahazo valiny ara-barotra ambony. Rehefa mahatratra valiny amin'ny asa ambony ianao, dia ho faly amin'ny asa ataonay ho anao. Raha tsy tratrantsika ireo valiny ireo dia afaka miresaka izany ihany koa isika.
Tags: fahafahana misafidymividyvidin'nyfahombiazanakivymahazoa izay aloanaovidinyQuoteslisitry ny fiantsenanasarobidy
29 Okt 2013 amin'ny 1:54 PM
Ny fiainana maso ivoho…
29 Okt 2013 amin'ny 2:03 PM
Dec 13, 2013 amin'ny 8: 28 AM